सी.वि.आर.एसले श्रवण यन्त्र वितरण गर्ने
गल्याङ - समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना सेवा (सी.वि.आर.एस) पोखराले गल्याङ नगरपालिका भित्र वडाहरुमा सहयोग गर्दे आएको छ । विशेष गरि गल्याङ नगरपालिका भित्रका अपाङगता भएका व्यक्तिहरु प्राथमितामा राखेर विभिन्न सहयोग गर्दे आएको छ । सोही क्रममा समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना सेवा (सी.वि.आर.एस) ले श्रवण यन्त्र वितरण गर्ने भएको छ ।
सुनाई सम्बन्धी समस्या भएका अपाङगता व्यक्तिले सुन्नमा सहज होस् भनेर प्रयोग गर्दे आएको श्रवण यन्त्र ( हियरिङ एड् ) वितरण गर्न लागेको सी.वि.आर.एस का सहजकर्ता कृष्ण लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । नगरभित्रका सुनाई सम्बन्धी समस्या भएका अपाङगता व्यक्तिले प्रयोग गर्ने श्रवण यन्त्र माग अनुसार वितरण गर्ने सी.वि.आर.एस ले जनाएको छ । समस्या भएर पहिले देखि नै प्रयोग गर्दे आएका व्यक्तिले पायक पर्ने वडा कार्यालय वा गल्याङ नगर स्तिरिय अपाङगता सञ्जाल समितीमा सम्पर्क राख्न सी. वि.आर.एस ले अनुरोध गरेको छ ।
यस्तै श्रवण यन्त्र प्रयोग नगर्ने अपाङगता व्यक्तिले आवश्यकता अनुसार माग गरेयो भने शिविर कै आयोजना गरि उपल्बध गराउने सकिने सी. वि.आर.एस ले बताएको छ । सी.वि.आर.एस ले गल्याङ नगरपालिकासंग सम्झौता गरि नगरभित्रका अपाङगता भएकालाई सहयोग गर्दे आएको छ । यसैबीच सी.वि.आर.एस ले गत मंसिर १७ गते पनि नगरभित्रका अपाङगता भएका व्यक्तिलाई ह्वियलचिएर वितरण गरेको थियो ।